IJalimane ngenkambo yeTitanic: ilungile njalo futhi ihlale ingalungile
AmaNazi aphikisana nentando
Lungisa njalo futhi ngaso sonke isikhathi akulungile
Odokotela ku-whirlpool ye-corona
Sekukonke, iqembu lodokotela alizange likhombise ukuphatha ngokuzethemba inkinga ye-corona. Kwakungekho nokuphikiswa emibonweni eyeqisayo ngezinye izikhathi yabameleli bakahulumeni, esikhundleni salokho kwakukhona ukuzimisela ukulandela imibono yabezindaba kanye nezixwayiso zikahulumeni kanye nokuhlukumeza abantu abangagonyiwe nokwenza izimpilo zabo zibe nzima ngangokunokwenzeka. Ngisho nesidingo sokugonywa kwezingane sahlanjalazwa odokotela abambalwa.
of Alexander Brandenburg, ngaphambili Amaviki we-3 I-5. Novemba 2021
Inkululeko yomuntu, ukuhlolwa kwezokwelapha kanye neKhodi Yodokotela baseNuremberg
Kungani izincomo zeKhodi yaseNuremberg zingasagcinwa? Ingabe izifundo zeminyaka yamaNazi azisabalulekile? Emuva ezinsukwini zenkazimulo noma ukuhaha nje kwenzuzo? 1. Imvume yokuzithandela yomuntu ohlolwayo iyadingeka ngempela. Lokho kusho ukuthi i Qhubeka ufunde…
of Alexander Brandenburg, ngaphambili Inyanga ye-1 29. October 2021
Amaqiniso ngeqiniso leCorona (asuka encwadini ayibhalela umhleli)
Konke esisitshele kona osopolitiki bamaqembu amadala ngeCorona kuze kube manje sekuphenduke amanga: Kwakuthiwa nje uma sesigoma, ubhubhane seluphelile. Khona-ke, kuphela lapho amaphesenti angu-50 egonyiwe, ubhubhane seluphelile. Qhubeka ufunde…
Isenzo esiluhlaza: I-kowtow ka-Habeck
Akekho ohlose ukuqeda intando yeningi! (ngemva kukaWalter Ulbricht)
Umbuso kahulumeni wezempilo we-corona, owavela entandweni yethu yeningi, ungaholela ekuguqukeleni ebudloveni obuvele benziwa noma ekufaneni kwazo zombili izinhlobo zokubusa zombuso.
Ngubani ophumelele ukhetho?
Lokho laba bantu ababaluleke kakhulu abafana ngabo ukunamathela kwabo, ubucayi babo kanye nokuntuleka kwemigomo. Akekho noyedwa kubo owake walokotha aphikisane nezinqubomgomo zikaMerkel ngendlela eyodwa.
of Alexander Brandenburg, ngaphambili Izinyanga ze-2 28. Septemba 2021
Umsangano wokugoma ubamba izingane
Icebo lokugoma elilandelwa uhulumeni ezinganeni nasebancane nasekuvikeleni abazali liyingxenye yemizamo engakwesobunxele yokuchitha lo mndeni emsebenzini wawo wangaphambili kanye nokunakekela izingane ezandleni zabazali (umshado konke / Uhlelo lobulili / inqubomgomo yabambalwa).
of Alexander Brandenburg, ngaphambili Izinyanga ze-3 17. August 2021
Ungesabi. Ukhombisa ukuqina, ubuqotho, nokuzimisela. Nizohlangana emiphakathini yenu, nenze amacebo okusizana, futhi ninxuse ukuziphendulela kwesayensi kanye nenkululeko yokukhuluma ebalulekile emphakathini ukuze uchume.
of Alexander Brandenburg, ngaphambili Izinyanga ze-4 14. August 2021
Impilo yansuku zonke iyakuletha ekukhanyeni: Ababusi banamavolontiya. Akudingeki ngaso sonke isikhathi kube ngamaphoyisa athatha isinyathelo ngesibindi. Bekade ibizwa ngeBlockwart!
of Alexander Brandenburg, ngaphambili Izinyanga ze-4 2. August 2021
Isisekelo seDesiderius Erasmus
Asiyona i-AfD, kepha-ke sisondele kuyo ngenxa yokukholelwa. Futhi njengeqembu elingelona iqembu, ngimi obala ngokuvotela i-AfD, ngoba imi futhi isebenza ngokwesisekelo soMthetho Oyisisekelo. Ngaphandle kwalokho ngangingeke ngibavotele futhi futhi ngingaholi kulesi sisekelo. I-AfD ikhala ngezinyathelo zamanje ezithathwe yiHhovisi Lokuvikelwa koMthethosisekelo ngesizathu esizwakalayo. Indlela ehlolwe ngayo ngobungcweti, uhulumeni wobumbano uzonqobeka ngemuva kweminyaka yezinqubo. Futhi lokho kuhle!
of Alexander Brandenburg, ngaphambili Izinyanga ze-4 27. Julayi 2021
Qaphela: Ukuhunyushwa kwaleli khasi kuzenzakalelayo futhi kungahle kube namaphutha amancane kuma-semantics noma i-colloquial expression.
Ukuyenga okuluhlaza okotshani
© Copyright 2019 | IJalimane kwisifundo seTitanic